Sokajy:Kaominina any Madagasikara Info. About. What's This
ⓘ Sokajy:Kaominina any Madagasikara
Alakamisy dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Anjozorobe, Faritanini Antananarivo. Ny isam-poniny dia 7751 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10717 ary ny kaodin-distrika dia 107
Alakamisy Ambohijato dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Ambositra, Faritanini Fianarantsoa. Ny isam-poniny dia 8200 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 20321 ary ny kaodin-distrika dia 203
Alakamisy Antivato dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Betafo, Faritanini Antananarivo. Ny isam-poniny dia 8825 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10907 ary ny kaodin-distrika dia 109
Alakamisy Itenina dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Fianarantsoa Ii, Faritanini Fianarantsoa. Ny isam-poniny dia 27289 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 22039 ary ny kaodin-distrika dia 220
ⓘ Kaominina any Madagasikara
anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Saint - Étienne any Frantsa Le Port any La Réunion Madagasikara Kaominina any Madagasikara Toamasina
zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Sainte - Suzanne any La Réunion Madagasikara Kaominina any Madagasikara Moramanga
An ala dia tanàna sy kaominina any Madagasikara ao amin ny Faritra Alaotra - Mangoro, distrikan i Anosibe An ala ao amin ny faritan i Toamasina. Madagasikara
anjara ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Ivato Analamanga
Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Ambatolampy Ambohidratrimo
Antanetibe Ambohidratrimo dia kaominina ao amin ny distrikan Ambohidratrimo, ao amin ny faritra Analamanga, any Madagasikara Misy zavatra tsy ampy anatin ity
ianao Endrika: Mafana Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Maevatanana
mandray anjara ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Andaingo
mandray anjara ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Ankazoabo
Alkamisikely dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Arivonimamo, Faritanini Antananarivo. Ny isam-poniny dia 3600 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10514 ary ny kaodin-distrika dia 105
Amparihitsokatra dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Ambatondrazaka, Faritanini Toamasina. Ny isam-poniny dia 10037 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 31312 ary ny kaodin-distrika dia 313
Ampasibe Onibe dia kaominina malagasy ao aminny Distrikani Toamasina II, Faritanini Toamasina. Ny isa-mponiny dia 18 095 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 31017 ary ny kaodin-distrika dia 310
Ampasy Nahampoa dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Fort Dauphin, Faritanini Toliary. Ny isam-poniny dia 5600 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 51503 ary ny kaodin-distrika dia 515
Analamitsivala dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Mahabo, Faritanini Toliary. Ny isam-poniny dia 10852 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 50905 ary ny kaodin-distrika dia 509
Andalamasina Vineta dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Sakaraha, Faritanini Toliary. Ny isam-poniny dia 4462 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 51211 ary ny kaodin-distrika dia 512
Andoharanomaintso dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Fianarantsoa Ii, Faritanini Fianarantsoa. Ny isam-poniny dia 19800 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 22027 ary ny kaodin-distrika dia 220
Ankarangona dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Antsiranana Ii, Faritanini Antsiranana. Ny isam-poniny dia 5610 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 71321 ary ny kaodin-distrika dia 713
Anontsibe Centre dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Manja, Faritanini Toliary. Ny isam-poniny dia 9626 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 50205 ary ny kaodin-distrika dia 502
Ianabinoa dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Betroka, Faritanini Toliary. Ny isam-poniny dia 7178 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 51713 ary ny kaodin-distrika dia 517